24 Afei Yosua maa Israel mmusua no nyinaa behyiae wɔ Sekem,+ na ɔfrɛɛ Israel mpanyimfo+ ne ahwɛfo ne atemmufo ne atitiriw nyinaa begyinaa nokware Nyankopɔn no anim.+ 2 Na Yosua ka kyerɛɛ nnipa no nyinaa sɛ: “Nea Israel Nyankopɔn Yehowa aka ni, ‘Tete no na mo agyanom+ te asubɔnten kɛse+ no agya nohoa; ɛhɔ na na Abraham ne Nahor+ papa Tera te, na saa bere no, na wɔsom anyame foforo. 3 “‘Akyiri yi mefaa mo nana Abraham+ fii asubɔnten kɛse+ no agya, na mema okyin Kanaan asase nyinaa so, na memaa n’ase trɛwee.+ Mede Isak maa no,+ 4 na memaa Isak nso nyaa Yakob ne Esau.+ Akyiri yi mede Bepɔw Seir maa Esau tenaa so;+ na Yakob ne ne mma nso kɔɔ Egypt.+ 5 Afei mesomaa Mose ne Aaron,+ na mede ɔhaw baa Egypt so;+ na ɛno akyi no miyii mo fii hɔ.+ 6 Bere a miyii mo agyanom fii Egypt+ beduu po no ho no, Egyptfo de nteaseɛnam ne apɔnkɔsotefo tiw+ mo agyanom baa Po Kɔkɔɔ no ho. 7 Afei wosu frɛɛ Yehowa,+ enti ɔmaa esum kabii bɛdaa mo ne Egyptfo no ntam,+ na ɔmaa po no bu faa wɔn so kataa wɔn so.+ Mode mo ani huu nea meyɛe wɔ Egypt no,+ na motenaa sare so nna pii.+ 8 “‘Nkakrankakra mede mo beduu Amorifo a wɔte Yordan agya no asase so, na wɔne mo koe.+ Na mede wɔn hyɛɛ mo nsa sɛ momfa wɔn asase ntena so, na mesɛee wɔn wɔ mo anim.+ 9 Afei Sipor+ ba Balak a ɔyɛ Moab hene no sɔre baa Israelfo so ne wɔn bɛkoe.+ Na ɔsoma kɔfrɛɛ Beor ba Balaam sɛ ɔmmɛdome mo.+ 10 Nanso mampɛ sɛ metie Balaam.+ Na hyira ara na ohyiraa mo.+ Enti migyee mo fii ne nsam.+ 11 “‘Afei mutwaa Yordan+ beduu Yeriko,+ na Yerikofo ne Amorifo ne Perisifo ne Kanaanfo ne Hitifo ne Girgasifo ne Hiwifo ne Yebusifo fii ase ne mo koe; nanso mede wɔn hyɛɛ mo nsa.+ 12 Na memaa mo ho hu dii mo anim, na ɛpam+ Amorifo ahene baanu—mo nkrante nnim, mo agyan nnim.+ 13 Na memaa mo asase a moammrɛ ho, na munyaa nkurow a ɛnyɛ mo na mokyekyee+ tenaa mu. Bobeturo ne ngo nnua a mudidi so yi nso, ɛnyɛ mo na muduae.’+ 14 “Enti afei munsuro Yehowa+ na momfa koma kronn ne nokwaredi+ nsom no. Na montow anyame a mo agyanom som wɔn wɔ asubɔnten kɛse no agya ne Egypt no ngu,+ na monsom Yehowa. 15 Sɛ nso mompɛ sɛ mosom Yehowa a, ɛnde ɛnnɛ mompaw nea mobɛsom no,+ sɛ anyame a mo agyanom a na wɔwɔ asubɔnten kɛse no agya no som wɔn+ no oo, sɛ Amorifo a mote wɔn asase so no anyame+ oo, mompaw nea mobɛsom no. Na me ne me fie de, yɛbɛsom Yehowa.”+ 16 Ɛnna ɔman no buae sɛ: “Ɛmpare yɛn sɛ yebegyaw Yehowa akɔsom anyame foforo. 17 Yehowa yɛn Nyankopɔn na oyii yɛne yɛn agyanom fii Egypt+ nkoafie,+ ɔno na ɔyɛɛ anwonwade akɛse yi wɔ yɛn ani so,+ ɔno na ɔbɔɔ yɛn ho ban wɔ yɛn akwantu mu, na ɔno na ɔhwɛɛ yɛn so faa aman horow no nyinaa mu.+ 18 Afei Yehowa pam aman no nyinaa fii yɛn anim,+ Amorifo a wɔte asase no so no. Enti yɛn nso yɛbɛsom Yehowa, efisɛ ɔno ne yɛn Nyankopɔn.”+ 19 Na Yosua ka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Morentumi nsom Yehowa, efisɛ ɔyɛ Onyankopɔn kronkron.+ Na ɔyɛ Onyankopɔn a ɔmpɛ sɛ ɔne obi bɛkyɛ ne som.+ Sɛ motew atua yɛ bɔne a, ɔremfa nkyɛ mo.+ 20 Na sɛ mugyaw Yehowa+ kɔsom ananafo anyame+ a, ɔno nso bɛdan ne ho ne mo adi no nwenweenwene na watɔre mo ase, bere a wayɛ mo papa akyi no.”+ 21 Ɛnna nkurɔfo no ka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Dabi, Yehowa ara na yɛbɛsom no!”+ 22 Afei Yosua ka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Mo ankasa mo anom na moapaw sɛ mobɛsom Yehowa;+ mo ara moyɛ adansefo.”+ Na wobuae sɛ: “Yɛyɛ adansefo.” 23 “Ɛnde montow ananafo anyame a ɛwɔ mo nkyɛn no ngu,+ na monnan mo koma mmra Israel Nyankopɔn Yehowa nkyɛn.” 24 Na ɔman no ka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Yehowa yɛn Nyankopɔn na yɛbɛsom no, na ɔno na yebetie no!”+ 25 Saa da no Yosua ne ɔman no yɛɛ apam, na ɔmaa wɔn ahyɛde ne atemmusɛm+ wɔ Sekem. 26 Afei Yosua kyerɛw nsɛm yi wɔ Onyankopɔn mmara nhoma+ no mu, na ɔde ɔbo kɛse+ bi sii hɔ wɔ odupɔn+ a esi Yehowa kronkronbea ho no ase. 27 Na Yosua toaa so ka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Monhwɛ, ɔbo yi bɛyɛ yɛn dansefo,+ efisɛ ate nea Yehowa aka akyerɛ yɛn nyinaa. Enti ɔbo yi bɛyɛ ɔdansefo na moampa mo Nyankopɔn.” 28 Afei Yosua gyaa ɔman no kwan ma obiara kɔɔ n’agyapade so.+ 29 Nsɛm yi nyinaa akyi no, Yehowa akoa Yosua, Nun ba no, wui bere a na wadi mfe ɔha ne du.+ 30 Na wosiee no n’asase so wɔ Timnat-Sera+ a ɛwɔ Efraim bepɔw so wɔ Bepɔw Gaase atifi fam no. 31 Na Israelfo kɔɔ so som Yehowa wɔ Yosua ne mpanyimfo a wɔtenaa ase wɔ Yosua akyi nyinaa bere so,+ mpanyimfo a wohuu nnwuma a Yehowa yɛ maa Israel no nyinaa.+ 32 Afei wosiee Yosef nnompe+ a Israelfo de fi Egypt bae no wɔ Sekem, asase a Yakob tɔ fii Sekem papa Hamor mma nkyɛn+ nnwetɛbona+ ɔha no so, na ɛbɛyɛɛ Yosef mma agyapade.+ 33 Aaron ba Eleasar nso wui,+ na wosiee no wɔ ne ba Finehas Koko so,+ asase a ɔde maa no wɔ Efraim bepɔw so no so.